Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Abantu baseMelika bafuna iBoze encinci kwiindiza
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo • Iiwayini kunye neMimoya
Ngaphezulu kwesiqingatha samaMelika (iipesenti ezingama-59) bacinga ukuba kufanelekile ukubekwa kwimilinganiselo yotywala obunokuselwa ngabantu kwiinqwelomoya.
Iipesenti ezingama-38 zicinga ukuba utywala kufuneka buthintelwe kwaphela.
I-1/3 iqala ukusela ikhefu kwindiza.
Iipesenti ezingama-41 bakholelwa ekuthinteleni ukusela utywala kuya kunciphisa inani leempikiswano zokubhabha ngenqwelomoya.
Kwabaninzi baseMelika, ngaphandle kwexesha losuku, isithethe sokuya eholideyini sihlala siqala ngobhiya kwisikhululo seenqwelomoya.
Ngapha koko, akuqhelekanga ukubona amaqela abakhenkethi betshona kwiibhotile zebhiya okanye zotywala ngaphambi kwemini.
Njengokuba izithintelo zokutshixwa ziye zaphakanyiswa kwilizwe liphela, abantu abaninzi banokuba nakho ukubhiyozela, besithi 'vuyisani' kwinkululeko.
Kukho amathuba amaninzi apha endleleni, ukuqala ngebha yesikhululo seenqwelomoya, ukuya kubhiya wendiza kwaye, ewe, iziselo xa ufika kwigumbi lehotele i-minibar.
Nangona kunjalo, sonke sifunde amabali ezindabeni nakumajelo eendaba ezentlalo abakhweli beenqwelomoya ekufuneka bekhutshiwe kwiinqwelomoya ngokhuseleko kuba bebekhonzwe kakhulu.